ခံစားခကျြရဲ့အစှနျးနှဈဖကျ – My Blog
တကယျကိုလှတဲ့နတျသမီးလေးကိုကြှနျတျောရရှိခဲ့တယျသူသာကြှနျ တော့ဘဝပဲလို့သတျမှတျထားခဲ့တယျကြှနျတျောမှာမထငျမှတျ ထားတဲ့ခံစားခကျြရှိခဲ့တာသိလိုကျရတဲ့နောကျအခဈြရဲ့နောကျကှယျကတနှာရာဏကိုကိုတိုငျမရောကျရောကျအောငျခရီးနှငျခဲ့မိ တယျ….. ကြှနျတျောသူနဲ့လကျထကျခဲ့ပွီးသုံနှဈအကွာမှာစခံစားမိတာကကပျကိုး ဆိုတဲ့ဖီလငျနဲ့ဘူး (အထနျကောငျ)ဆိုတဲ့ခံစားခကျြ ပေါ့သူမနဲ့ကပျကိုး ခံစားပွီးအခွားသူနဲ့ဆိုဘူး (အထနျကောငျ)ကိုကွိုကျနှဈသကျလာတယျ….အခြိနျကတော့ရုံးကသူငယျခငျြးနဲ့လိငျ ကိစ်စအကွောငျးပွောမိတဲ့နကေစပွီပါပဲ…
သူငယျခငျြးရဲ့ကောငျမလေးကအရမျးရှုပျပွီးပှလှေနျးလို့အိမျထောငျသညျဖွဈတဲ့ကြှနျတော့ကိုရငျဖှငျ့ခဲ့တယျသူငယျခငျြးကသူ့ ကောငျမလေးကိုခဈြလှနျးလို့သဝနျတိုရာကနသေူ့ကောငျမလေးဘာလို့ရညျးစားမြားလညျးတှေးတောရငျးကကြှနျတျောနဲ့မလုပျသငျ့ တာတဈခုတိုငျပငျလုပျခဲ့မိတာကအစပေါ့သူကြှနျတော့ကိုအကူအညီတောငျးတာကတော့သူ့ကောငျမလေးစိတျကိုဘယျလိုဆိုတာသိ ခငျြလို့ပါပဲအဲ့နကေ့ကြှနျတျောကူညီဖို့ကတိပေးလိုကျမိတယျသူ့ကောငျမလေးကိုကြှနျတျောကိုလိုကျခိုငျးခဲ့တယျသူမအရမျးကွီးမလှ ပမေဲ့ဆှဲဆောငျရှိနတေော့ကြှနျတျောကူညီရာကနစေိတျပါမိလာတယျသူငယျခငျြးမရိပျမိအောငျပေါ့သူကောငျမလေးကိုကြှနျတော့ စိတျရှိသမြှအခြိနျပေးပွီးလိုကျခဲ့တယျတကယျပဲရလာခဲ့တယျသူမကိုသူငယျခငျြးနဲ့တိုငျပငျတုနျးကကောငျမလေးစိတျကိုပိုနားလညျ အောငျထိပါပဲဒါပမေဲ့သူ့မနဲ့ကြှနျတျောစိတျကှယျရာမှာဖွဈခဲ့မိတော့တာပါပဲကြှနျတော့နာမညျကိုမိတျဆကျပါရစေ..ကိုနိုငျပါ သူငယျခငျြးက..နိုငျလငျးလို့ချေါပွီးကြှနျတော့မိနျးမကသီရိသူ့ကောငျမလေးကဖွိုးအိနောကျပိုငျးနာမညျနဲ့ပဲပွောကွမှာမို့သိသငျ့ တယျထငျလို့နျောပရိသတျကွီးရေ
ကိုနိုငျဖွိုးလှတယျမလားအရမျးလှတာပေါ့ဖွိုးကိုကိုအရမျးသဘောကတြာဖွိုးကိုတို့အတူနကွေရအောငျ..တကယျလားကိုနိုငျ တကယျပေါ့ကို့နဲ့လိုကျခဲ့နျောစိတျငွိမျရာကို အငျး……….ဖွိုးကိုအရမျးလိုးလို့ကောငျးတယျဖွိုးတယျဖငျလေးတှတေငျးနတောပဲ ကို ဖွိုးကိုလိုးရတာအရမျးကွိုကျတယျဖွိုးရော..ဖွိုးလဲကိုနဲ့လိုးရတာ သဘောကတြယျ …ကို့လီးကိုစုပျပေးအုံး ..အားအရမျးကောငျး တယျ..ကိုဖွိုးကိုယကျပေးမယျ…ဖွိုး ကွိုကျလား ကွိုကျတာပေါ့ကိုနိုငျဖွိုးအရမျးသဘောကတြယျ…
ဖွိုးကိုနိုငျလငျးမသိအောငျခိုးပွီးလိုးနမေိတယျတာပမေဲ့ကြှနျတျောမထငျထားတာကနိုငျလငျးသိနတောပါပဲ ကိုနိုငျဖွိုးအခွအေနေ လဘေယျလိုလဲကြှနျတျောစလိမျပါပွီနိုငျလငျးကို သူစိတျကစားနတောပါမငျးပွနျရမှာပါသူငယျခငျြ….အဲ့တာစိတျကစားတာလားကို နိုငျသညျမှာကွညျ့…ဟာမငျးမငျးသိနတေယျ အေးကိုနိုငျမငျးနဲ့ဖွိုးဘာလိုထိဖွဈနတေယျငါသိတယျ…sorry တကယျတောငျးပနျပါ တယျ..ငါမှားပါတယျသူငယျခငျြးရာ ကိုနိုငျမငျးမမှားပါဘူးငါကိုတိုငျအဲ့လိုဖွဈစခေငျြခဲ့တာပါ ဘယျလိုဘယျလို ငါနားမလညျဘူးနိုငျ လငျး…
အမှနျးတိုငျးပွောရရငျငါကိုတိုငျကဖွိုးတခွားသူနဲ့လိုးခံနတောကိုဖီးလာနတောပဲကိုနိုငျ..ဟငျ..မငျးကဘယျလိုကွီးလဲ ..ဘယျလိုကွီး မဟုတျဘူး..မငျးအခုသိပွီပဲလငေါဖွိုးနဲ့မငျးကိုလိုးစခေငျြတာ…သူဖီးလာပွီးတခွားသူနဲ့အလိုးခံနတောငါကွညျ့ခငျြနတော..သူကွေ နပျနတောကိုပြျောနတောလေ..ကြှနျတျောနားမလညျသလိုဖွဈသှားတယျနိုငျလငျးခံစားခကျြကို..ငါ့ကိုသခြောရှငျးပွပေးဦးနိုငျလငျး မငျးကဘယျလိုကွီလဲကှာ….
ဒီလိုကှာငါကကပျကိုးဆိုတဲ့ဖီးကသဘောကတြာအဲ့တာကကို့ဆျောတာမှမဟုတျမိနျမကိုတခွားသူနဲ့လိုးခံရတာကိုကွညျ့ခငျြမွငျခငျြ တာ..ငါ့ဆျောဖွိုးကအထနျမယား လို့ချေါတယျ မငျးကတော့သူနဲ့ငါ့အတှကျ ဘူး (အထနျကောငျ) ဆိုတဲ့ကွားလူပေါ့ နောကျထကျမငျး မသိသေးတာက ဖွိုးမငျးနဲ့ငါသူငယျခငျြးဆိုတာသိတယျ အဲ့တာအပွငျ မငျးမိနျးမနဲ့လညျးသူကသူငယျခငျြးလေ ..ဘာ…ဖွိုးသိနေ တယျငါ့အကွောငျးတှကေို..အေး..ကိုနိုငျ မငျးဘယျလိုလဲဖွိုးကိုလိုးရတာသဘောကလြား…သူဖငျတှကေိုခရြတာသဘောကြ လား….ကြှနျတျောယောငျပွီးပွောလိုကျတာက အငျးတဈလုံးတညျးပေါ…. နိုငျလငျးဆကျပွောတာက မငျးမိနျးမသီရိ ကိုမငျး ဘယျလောကျခဈြလဲ သူတခွားသူနဲ့ဖောကျပွနျတာ မငျးလကျခံနိုငျလား..မေးရကျတယျနိုငျလငျးရယျငါဘယျလကျခံနိုငျမလဲ ..အဲ့တာ ဆိုသူအလိုကိုမငျးမဖွညျ့နိုငျရငျဘယျလိုလုပျမလဲ ကြှနျတျောအရမျးတှဝေသှေားခဲတယျ သူပေးတဲ့အတှေးထဲမှာ……
ငါဘာလုပျရမလဲနိုငျလငျး..ငါ့ကိုပွောပွပါပွောပွပါသူငယျခငျြးရာ…..မငျးမိနျးမသီရီကိုစမျးသပျပေါ့ကှာ သူဘယျလောကျထနျလဲ ဘယျလောကျ စိတျကွီးလဲသိအောငျလုပျပေါ့ မငျးလုပျမယျမလားကိုနိုငျ… အငျးလုပျမယျသူ့ကိုစမျးကွညျ့မယျသူငယျခငျြး… အဲ့တာ ဆိုမငျးအဝတျအစားကစပွီးစမျး အတိုတှနေဲ့လညျဟိုကျဆငျပေးပွီးသူမြားတှကွေညျ့နတောသူသတိထားမိအောငျလုပျကွညျ့..အေး လုပျမယျနိုငျလငျး အဲ့နောကျသီရိကိုကြှနျတျောအစီအစဉျတိုငျးလုပျကွညျ့တယျသူ့ကိုဘယျသူတှကွေညျ့ပွီးပွဈမှားနတေယျပွော ပွောပေးတယျအစကသူမဟုတျပါဘူးသညျလိုပဲကွညျ့တာနမှောပါပွောတယျနောကျပိုငျးသူကိုတိုငျသတိထားပွီးဘယျသူကွညျ့နေ တယျဆိုတာလကျတို့တတျလာတယျ…နောကျဆိုကြှနျတျောမပါတောငျနို့တှပေျေါနအေောငျဝတျပွီးသှားရတာသဘောကလြာတယျ
နိုငျလငျးမငျးပွောသလိုငါ့မိနျးမလိုကျလုပျပွီးသူ့ကို့ပွဈမှားပွီးကွညျ့တဲ့အတှခေံခငျြနပွေီဘာဆကျလုပျကမလဲနိုငျလငျး မငျးတျော တယျကိုနိုငျမငျးလုပျနိုငျတယျလေးစားတယျ မငျးမိနျးမသီရိကိုအရောငျတငျပေးနိုငျလိုကျပွီ…သူ့ကိုနောကျထပျမငျးလိုးတိုငျး သူ့ကို ကွညျ့ပွီးလိုးခငျြတဲ့သူတှေ အနနေဲ့ပွောပေးကွညျ့ ခံစားခိုငျးကွညျ့ ဟိတျကောငျဖွဈပါ့မလားကှ လုပျကွညျ့ပါဘာပွောလဲသာ ပွနျပွော..အေးပါကှာမငျးကိုပဲဆရာတငျရမှာပဲ …မိနျးမသီရိနလေ့ညျ့က ဘယျသူလိုကျကွညျ့သေးလဲငါ့မိနျးမခြောလေးကို…… ရုံး ကကောငျလေးလသေူကို့အကိုသိပါတယျသူနာမညျက ဇျောဇျောလေ… အျောအေးသိတယျ..သူလား အကိုကွညျ့တာမှ အဝတျမရှိ ဘဲ နနေသေလိုကွညျ့တာ ကကျြသီးတောငျထတယျ ကိုမွငျရငျသဝနျတိုနမှောသိလား ကို့လီးကကွညျ့ပါအုံးအရမျးတောငျနေ ပွီ..ဟောတော့ထူးထူးဆနျးဆနျးပါလား စကားပွောနရေငျး မိနျးမသီရိ လိုးရအောငျအရမျးလိုးခငျြလာပွီ
လိုးလို့ကောငျးလျိုကျတာ အခုသီရိကိုဇျောဇျော လိုးနသေိလားမိနျးမ ကိုကလဲ သီရိကိုဇျောနဲ့ပေးလိုးနတောလား ဇျောဟုတျလား အဖြားတောငျစှတျပွီးခံစားနတောလား မိုကျတယျကှာ သီရီဇျောလိုးပေးတာကောငျးလား အရမျးကောငျးတယျ အရမျးကောငျးတယျ မသီရီယောကျြား အရှမှေ့ာ လိုးပေးမယျ မသီရီကို ဖငျပါလိုးပေးမယျ ….ကိုဘာတှပွေောနတောလဲ သီရိအရမျးရှကျလာပွီ … အား..ကိုသီရိပွီးတော့မယျ ကိုမွနျမွနျလိုး..လိုးပေး…..အား…. နိုငျလငျးမငျး အရမျးတျောတယျ ငါ့မိနျးမသီရိ သူတခွားသုလိုးတာ ခံ ခငျြနပွေီ ငါလဲအရမျး ဖီးဖွဈတယျသူ့ကိုကွညျ့ပွီး …..ok. ကိုနိုငျမငျးငါ့ဆျောကိုလိုးတုံးငါ့ဖီးကိုသိပွီနျော အေးပါနိုငျလငျးရာ မငျး သီရိကို လိုးမလား.ငါကြိုးစားကွညျ့မယျ လိုးမှာပေါ့ကိုနိုငျရ သီရိဖငျလုံးကတျောတျောမိုကျတာ …ok
သီရိ မိနျးမ မငျးနိုငျလငျးကိုသိတယျမလား အငျးသိတယျလေ အကိုနဲ့သူငယျခငျြးပဲဟာ သူမိနျးမကို လိုးခငျြနတောအကို သတိထားမိ တယျ ကိုနျောကို့မိနျးမကိုအဲ့လိုပွောစရာလား…သီရိကလဲဟိုနကေ့တောငျဇျောဇျော နဲ့ လိုးသလိုကိုလုပျပေးတာကွညျ့လေ အရမျး ကောငျးတယျမလား..ကိုနျော မသိဘူးသှားသူမြားအရမျးစိတျပါသှားအောငျလိုးပွီး အခုလဲကို့သူငယျခငျြလေ သူကမခြောဘူးလား ခြောပါတယျ အဲလို့ခြောခြောလေးကို စိတျမပါဘူးလား ကိုမိနျးမကို နားလညျပေးနိုငျတယျလေ ပိုလဲခဈြတယျ သူကိုတှကွေ့ညျ့မ လား…ကိုတကယျကွီးပေးနမေလို့လားသီရိကို သီရိကိုသူနဲ့နစေခေငျြတာလားကိုကရော ကိုသီရိကိုပိုပွီး ခံစားစခေငျြတယျ ပိုပြော စခေငျြတယျ သဘောတူလားကိုပွောတာ ….. အငျးကို့သဘောလေ သူသီရိကိုအရမျးလိုးရငျဘယျလိုလုပျမလဲ ကိုပွောထားမယျ လေ စိတျခနြျော ဘယျတော့လဲကို ..ဒီနညေ့ပဲလုပျလိုကျမယျ ….ဟယျ
ဒီည အငျးသီရိ …… သီရိ နိုငျလငျးလာပွီ တခုခု ဧညျ့ခံလိုကျအုံးကို အပွငျထှကျပွီးလိုတာဝယျလိုကျအုံးမယျ …ဟုတျကိုနိုငျ မွနျမွနျ ပွနျလာနျော အေးပါမိနျးမကလဲနိုငျလငျးကမကိုကျစားပါဘူး… မကိုကျစားတာတော့သိတာပေါ့အခုလာတဲ့အကွောငျးကကိုကျစားမှာ ထကျပိုကွောကျဖိုးကောငျးတယျ သီရိကလဲ ပိုရငျခုနျဖို့ကောငျးတာပါ….ပွောတတျတဲ့ကိုလူခြောကို့မိနျးမကို တခွားသူကလိုးဖို့လာ တာ ရငျခုနျနတေယျပေါ့… သှားသှားမွနျမွနျသှားပွီးပွနျလာခဲ့ …ဟိုလူကရောကျထဲစားတော့မဲ့မကျြလုံးနဲ့ကွညျ့နတောအသညျးယား စရာကွီး….အမလေးကွကျသီးတောငျထတယျ…
သီရိညီမကိုနိုငျဘယျထှကျသှားပွနျတာလဲ… လိုအပျတာလေးသှားဝယျတာကိုနိုငျလငျး ဟာ..သညျကောငျကလဲ အားနားစရာ ကွီး…..အမလေးလေးသူကအားနာတယျတဲ့ငါ့ကိုငါ့ယောကျြားရှမှေ့ာလိုးဖိုလာတဲ့သူကမြား ပွောတတျလိုကျတာ ..အငျးပုံစံကတော့ မိုကျသားဘျောဒီလဲတောငျ့မဲ့ပုံ လီးလဲကွီးမဲ့ထငျတယျကိုနိုငျထကျ ငါ့ကိုငါ့လငျမဟုတျပဲ အလိုးပထမဆုံးခံရမဲ့သူက ငါ့ရှတေ့ောငျ ရောကျနပေါပွီလား…ရငျခုနျလိုကျတာ သီရိ ညီမအရမျးလှတယျသိလား ကိုယျလုံးကိုပျေါစတေယျ သီရိဝတျလိုကျတိုငျး ကိုဆိုအမွဲ ပွောနကေိကိုနိုငျကို ကိုလငျးတော့မွှောကျနပေါပွီ ဖွိုးလောကျမလှပါဘူး လှတာပေါ့သီရိကလဲဖွိုးနဲ့အကှာကွီး ..သိရီကိုရလို့ကိုနိုငျ အရမျးကံကောငျးတယျလို့ရုံးမှာပွောကွတယျလူတိူငျး ဟုတျလား တကယျကွီးလားသီရိတော့ခေါငျတိုကျတော့မယျထငျတယျ မွောကျပွီးလေ တကယျပွောတာသီရိကိုယောကျြားတိုငျးအခုရရငျအခုယူမဲ့သူကွီးပဲ ပွီးတော့ အနားကပျလာသီရိတိုးတိုးလေးပွော မယျ သိရီကို ကို့တို့တဈရုံးလုံးမလိုးခငျြတဲ့သူမရှိဘူး အဲ့တာသီရီယျြေားအသိဆုံးပ.ဲ .ရှငျ..
ဘာတှလောပွောနလေဲမသိဘူး….တဈရုံးလုံးကယောကျြားလေးတှလေား.. ဟုတျတယျသီရိ …. အခုတောငျသီရိကိုကိုအရမျးလိုး ခငျြနပွေီ ဟိုကောငျကသူ့ရှေ့ မှာစလိုးပေးဖို့ပွောထားလိုလေ… ကိုနိုငျကသီရိကို ဘာလို့ကိုနိုငျလငျးနဲ့ လိုးခိုငျးခငျြတာလဲအကို….သူ သီရိကိုခဈြလို့ပေါ့ …ဟငျ..ကိုနိုငျလငျးရောဖွိုးကို အဲ့လိုအလိုးခံခိုငျးမှာလား …ဖွိုးကိုတစိမျးလူတှနေဲ့လိုးခိုငျးမှာလား… သီရိပွောတာ တောငျနောကျကနြပွေီဖွိုးအခုဆိုကိုတို့ရုံးကလူတှနေဲ့ အလိုးမခံဘူးတဲ့သူမရှိဘူး….တကယျကိုနိုငျလဲပါတယျလာ…အဟုတျပေါ့… ကနျြကနျြသူကအပွငျမှာဖွိုးကိုတောငျလိုးပွီးနပွေီ…ဟောပွောရငျးသူပွနျလာပွီတကယျကွီးငါသူမြားအလိုးခံရတော့မှာပါလား…
သောကျစားကွပွီးညနစေောငျးကနမှေောငျစပွိုးလာတော့ အိမျတခါးတှကေိုနိုငျလိုကျပိတျလိုကျကာ ကြှနျတော့မိနျးမအလိုးခံဖို့ ပွငျဆငျလို့စိတျထဲဖီးအရမျးဖွဈနသေညျပေါ့ဗြာ ကြှနျတျောမိနျ့းမကိုနိုငျလငျးစပွီးနမျးလိုကျပွီး သိရီမကျြလုံးလေးမှေးပွီးစငျးလာပွီ လကျတှကေ သီရိအဝတျတှစေပွီး ခှာခနြလေိုကျတာ အောကားကွညျ့ရတာထကျ ပိုပွီးဖီးဖွဈမိတယျ သီရိမကျြလုံးတှကြှေနျတော့ စီ ရုတျတရကျရောကျလာပါလား သူမကျြလုံးအကွညျ့မြိုး ကတနှာစိတျတှပွေညျ့နပွေီလို့ခံစားရတယျ သူကြှနျတော့ကိုကွညျ့ပွီး သူ ဖီးတတျနတော သူ့ကိုစလို့တဲ့ညကလိုပါပဲလား နိုငျလငျး နို့စို့ရငျးကအောကျကိုတဖွေးဖွေးဆငျးလာပွီးသီရိ ရဲ ရတနာလေးကိုယကျ ပေးလိုကျသညျ သီရိ သီရိအခုတော့ငါနငျ့ကိုလိုးရတော့မှာပါလား… နငျငါလိုးတာခံရတော့မှာပါလား အရငျကတော့မငျးလောကျ တညျငွိမျတဲ့သူမရှိသလိုနဲ့အခုတော့နငျ့လငျရှမှေ့ာတငျနငျအလိုးခံနပွေီနငျကိုသလေိုးပွဈမယျ နငျ့ကိုလိုးဖို့ငါကွိုတငျပွီးဂျေါလီတှေ အခြိနျပေးထညျ့ထားတာသုံးနှဈရှိပွီနငျကိုနိုငျနဲ့ယူတဲ့နထေဲကလေ… …..အားအား သီရိကိုလိုးပေးပါတော့နျောကိုနိုငျရှမှေ့ာလိုပေးပါ တော့ကိုနိုငျလငျးသီရိမနနေိုငျတော့ဘူးနျာ ..အငျးပါသီရိရယျအခုလိုးပေးမယျ…. ကိုလီးကိုကွညျ့ပါအုံး…အမလေးအကွီးကွီးပါလား အဖုအထဈတှနေဲ့ သတေော့မှာပဲ…. မသပေါဘူးသီရိရယျနတျပွညျရောကျသှားမှာပါ
နိုငျလငျးသီရိကိုလိုးနပွေီ လိုးနပွေီ ဆောငျ့ခကျြတှကေလဲပွငျးလိုကျတာသီရိကော့နတောပဲ….. သီရိအရမျးကောငျးနပွေီ …မိုကျ တယျကှာ…သီရိကိုတစိမျးလူလိုးနပွေီငါ့ရှမှေ့ာတငျ အခုကွတော့လဲခံနလေိုကျတာ ကော့ပြံနတောပဲ အရငျကသီရိမှဟုတျရဲ့လား တောငျထငျရတယျ ဟောကုနျးပွီးစုပျနပွေီဟိုကောငျ့လီးကို အငမျးမရပါလား တျောတျော ထနျနပွေီ ငါ့လီးလဲအရမျးတောငျပွီးထုလိျု့ ကောငျးနပေါလား သီရိအဲ့ကောငျနဲ့အလိုးခံတာကွညျ့ပွီး… ဖငျထောငျလိုးနပွေနျပွီသီရိဖငျတှတေုနျဆငျးနတောပဲ ရမျးနတောပဲ သူကလဲပွနျဆောငျ့တယျဟ တျောတျောနှာကွီးပါလားသီရိတယျအခုတော့နငျ့စိတျတှေ ပွလိုကျပွီပေါ့ ….သီရိရနေငျ့လငျကွညျ့ပါအုံး နငျအလိုးခံနတောကွညျ့ပွီးဖီးအရမျးတတျနပွေီ ပါးစပျကလတတှတျတှတျနဲ့ဘာတှပွေောနလေဲ မသိဘူး..နငျ့ဖငျကွီးတှလေိုးလို့ အရမျးကောငျးတယျဟာ …နငျ့ကိုကိုနိုငျဖငျလိုးလား .. မလိုးဘူးဘူးကိုနိုငျလငျး..
ကောငျးတယျနငျ့ဖငျကိုငါပါကငျ့ဖှငျ့ပေးမယျ… ဖငျ …ဖငျလိုးမလို့လား…နာမှာပေါ့မလုပျပါနဲ့နျော မရဘူးနငျ့လငျကိုပွောပွီးသား ငါ လိုးရငျဖငျပါလိုးတတိတာ ကိုနိုငျလငျးသီရိပွီးတော့မယျ…မွနျမွနျ..အမလေးကောငျးလိုကျတာ ဘယျလိုကောငျးမှနျးမသိဘူး.ပွီးပွီ ပွီးပွီ….ဟငျး…..သီရိပွီးပွီဆိုကို့အလှညျ့နျော …တေ.ှမယျဖငျကောငျးတဲ့သီရိဖငျကိုလိုးပွဈမယျ ကိုနိုငျလငျးဘာလို့ထုတျလိုကျတာ လဲ မလိုးတော့ဘူးလား …မဟုတျဘူးသီရိဖငျပွောငျးလိုးမလို့ …ဟငျ.. ကိုနိုငျ သီရိကိုဖငျလိုးမလို့တဲ့ကိုနိုငျတောငျမလိုးဘူးသီရိနာမှာ ဆိူးလို့ ကိုနိုငျမပွောတော့ဘူးလား….. ကိုနိုငျလငျးကိုကိုကတိပေးတားတယျမိနျးမ သူနဲ့လိုးခိုငျးရငျသူ့သဘောပါလို့…..တကယျကွီ လာ… တှတေ့ယျနျောသီရိလေး နငျ့လငျသဘောတူပွီးသားသူမလိုးရသေးနဲ့ ဟောက ဖငျပေါကျလေးကို ကိုအရငျလိုးပွီးပါကငျဖှငျ့ ပေးမယျ သီရိဖငျကိုတှတေို့ငျးဖငျးလိုးမယျလို့စိတျကူးထားတာသိရဲ့လား အခုဖငျကိုဂယျြလိမျးပေးမယျ သီရိမနာအောငျ …မြားမြား လိမျးပေးကိုနိုငျလငျး ရပွီးအသကျကိုပုံမှနျရှုပွီးစအိုဖှငျ့ထားသီရိ ထညျ့တော့မယျ … နိုငျလငျးခနလေးခနလေး ဘာလဲကှ ငါတေ့ ပေးခငျြလို့ပါကှ ….ဝိုးမိုကျခကျြပဲဟတှေ့လေ့ားနငျ့လငျကိုတိုငျနငျ့ဖငျလိုးဖို့ တညျ့ပေးခငျြနတော ရပွီထညျလိုကျတော့ ….အား….နာ တယျ ခေါငျးဝငျနပွေီမိနျးမ ရတော့မယျတောငျ့.ထား
အား…ကောငျးတယျကှာမငျးမိနျးမဖငျကကွတျနတောပဲ ok ရသှားပွီ အားလုံးဝငျသှားပွီမိနျးမ အျောကိုနိုငျသူကိုတိုငျ ကြှနျမဖငျခံဖို့ တပေ့ေးပွီး ခံခိုငျးနတောပါလား အဝငျအထှကျလုပျနပွေီ တမြိုးပဲနာလဲနာတယျ ကောငျးလဲကောငျး သလိုပဲ..သီရိရငေါနငျ့ဖငျကို လိုးရပွီဟ. နငျ့ဖငျကိုမှနျးရကြိုးနပျပွီ ကောငျးတယျ … အမလေး ကောငျးလိုကျတာ ဖငျခံတယျဆိုတာ ကိုနိုငျလငျးလိုး ကွမျးကွမျး လိုး ငါ့မိနျးမသီရိဖငျကိုကွမျးကွမျးသာလိုး သူခံနိုငျနပွေီ လိုးမှာလိုးပေးမှာ ကိုနိုငျးမငျးရှကေ့သှားလီစုပျခိုငျး ပွီကွညျ.့…. သီရိလို တညျကွညျပွီ အပွဈကငျးစငျတဲ့ရုပျကလေးကအခုတော့ တနှာခိုးတှပွေညျ့ပွီးဖငျအလိုးခံနလေိုကျတာ ဘေးအိမျက အထနျးသမား အငယျလေးခြောငျးကွညျဘပွီးအံဩနပေါတော့တယျ…အလိုးခံလိုကျရတာမြားမနကျမိုးလငျးတဲ့ထိနိုငျလငျးနဲ့သူ့လငျကိုနိုငျသီရိကို တနှာကွီးသောမိနျးမအဖွဈလမျးဖောကျပေးလိုကျပါတော့သညျ
တကယ်ကိုလှတဲ့နတ်သမီးလေးကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့တယ်သူသာကျွန် တော့ဘဝပဲလို့သတ်မှတ်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်မှာမထင်မှတ် ထားတဲ့ခံစားချက်ရှိခဲ့တာသိလိုက်ရတဲ့နောက်အချစ်ရဲ့နောက်ကွယ်ကတနှာရာဏကိုကိုတိုင်မရောက်ရောက်အောင်ခရီးနှင်ခဲ့မိ တယ်….. ကျွန်တော်သူနဲ့လက်ထက်ခဲ့ပြီးသုံနှစ်အကြာမှာစခံစားမိတာကကပ်ကိုး ဆိုတဲ့ဖီလင်နဲ့ဘူး (အထန်ကောင်)ဆိုတဲ့ခံစားချက် ပေါ့သူမနဲ့ကပ်ကိုး ခံစားပြီးအခြားသူနဲ့ဆိုဘူး (အထန်ကောင်)ကိုကြိုက်နှစ်သက်လာတယ်….အချိန်ကတော့ရုံးကသူငယ်ချင်းနဲ့လိင် ကိစ္စအကြောင်းပြောမိတဲ့နေကစပြီပါပဲ…
သူငယ်ချင်းရဲ့ကောင်မလေးကအရမ်းရှုပ်ပြီးပွေလွန်းလို့အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော့ကိုရင်ဖွင့်ခဲ့တယ်သူငယ်ချင်းကသူ့ ကောင်မလေးကိုချစ်လွန်းလို့သဝန်တိုရာကနေသူ့ကောင်မလေးဘာလို့ရည်းစားများလည်းတွေးတောရင်းကကျွန်တော်နဲ့မလုပ်သင့် တာတစ်ခုတိုင်ပင်လုပ်ခဲ့မိတာကအစပေါ့သူကျွန်တော့ကိုအကူအညီတောင်းတာကတော့သူ့ကောင်မလေးစိတ်ကိုဘယ်လိုဆိုတာသိ ချင်လို့ပါပဲအဲ့နေ့ကကျွန်တော်ကူညီဖို့ကတိပေးလိုက်မိတယ်သူ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်ကိုလိုက်ခိုင်းခဲ့တယ်သူမအရမ်းကြီးမလှ ပေမဲ့ဆွဲဆောင်ရှိနေတော့ကျွန်တော်ကူညီရာကနေစိတ်ပါမိလာတယ်သူငယ်ချင်းမရိပ်မိအောင်ပေါ့သူကောင်မလေးကိုကျွန်တော့ စိတ်ရှိသမျှအချိန်ပေးပြီးလိုက်ခဲ့တယ်တကယ်ပဲရလာခဲ့တယ်သူမကိုသူငယ်ချင်းနဲ့တိုင်ပင်တုန်းကကောင်မလေးစိတ်ကိုပိုနားလည် အောင်ထိပါပဲဒါပေမဲ့သူ့မနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကွယ်ရာမှာဖြစ်ခဲ့မိတော့တာပါပဲကျွန်တော့နာမည်ကိုမိတ်ဆက်ပါရစေ..ကိုနိုင်ပါ သူငယ်ချင်းက..နိုင်လင်းလို့ခေါ်ပြီးကျွန်တော့မိန်းမကသီရိသူ့ကောင်မလေးကဖြိုးအိနောက်ပိုင်းနာမည်နဲ့ပဲပြောကြမှာမို့သိသင့် တယ်ထင်လို့နော်ပရိသတ်ကြီးရေ
ကိုနိုင်ဖြိုးလှတယ်မလားအရမ်းလှတာပေါ့ဖြိုးကိုကိုအရမ်းသဘောကျတာဖြိုးကိုတို့အတူနေကြရအောင်..တကယ်လားကိုနိုင် တကယ်ပေါ့ကို့နဲ့လိုက်ခဲ့နော်စိတ်ငြိမ်ရာကို အင်း……….ဖြိုးကိုအရမ်းလိုးလို့ကောင်းတယ်ဖြိုးတယ်ဖင်လေးတွေတင်းနေတာပဲ ကို ဖြိုးကိုလိုးရတာအရမ်းကြိုက်တယ်ဖြိုးရော..ဖြိုးလဲကိုနဲ့လိုးရတာ သဘောကျတယ် …ကို့လီးကိုစုပ်ပေးအုံး ..အားအရမ်းကောင်း တယ်..ကိုဖြိုးကိုယက်ပေးမယ်…ဖြိုး ကြိုက်လား ကြိုက်တာပေါ့ကိုနိုင်ဖြိုးအရမ်းသဘောကျတယ်…
ဖြိုးကိုနိုင်လင်းမသိအောင်ခိုးပြီးလိုးနေမိတယ်တာပေမဲ့ကျွန်တော်မထင်ထားတာကနိုင်လင်းသိနေတာပါပဲ ကိုနိုင်ဖြိုးအခြေအနေ လေဘယ်လိုလဲကျွန်တော်စလိမ်ပါပြီနိုင်လင်းကို သူစိတ်ကစားနေတာပါမင်းပြန်ရမှာပါသူငယ်ချင်….အဲ့တာစိတ်ကစားတာလားကို နိုင်သည်မှာကြည့်…ဟာမင်းမင်းသိနေတယ် အေးကိုနိုင်မင်းနဲ့ဖြိုးဘာလိုထိဖြစ်နေတယ်ငါသိတယ်…sorry တကယ်တောင်းပန်ပါ တယ်..ငါမှားပါတယ်သူငယ်ချင်းရာ ကိုနိုင်မင်းမမှားပါဘူးငါကိုတိုင်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်ခဲ့တာပါ ဘယ်လိုဘယ်လို ငါနားမလည်ဘူးနိုင် လင်း…
အမှန်းတိုင်းပြောရရင်ငါကိုတိုင်ကဖြိုးတခြားသူနဲ့လိုးခံနေတာကိုဖီးလာနေတာပဲကိုနိုင်..ဟင်..မင်းကဘယ်လိုကြီးလဲ ..ဘယ်လိုကြီး မဟုတ်ဘူး..မင်းအခုသိပြီပဲလေငါဖြိုးနဲ့မင်းကိုလိုးစေချင်တာ…သူဖီးလာပြီးတခြားသူနဲ့အလိုးခံနေတာငါကြည့်ချင်နေတာ..သူကြေ နပ်နေတာကိုပျော်နေတာလေ..ကျွန်တော်နားမလည်သလိုဖြစ်သွားတယ်နိုင်လင်းခံစားချက်ကို..ငါ့ကိုသေချာရှင်းပြပေးဦးနိုင်လင်း မင်းကဘယ်လိုကြီလဲကွာ….
ဒီလိုကွာငါကကပ်ကိုးဆိုတဲ့ဖီးကသဘောကျတာအဲ့တာကကို့ဆော်တာမှမဟုတ်မိန်မကိုတခြားသူနဲ့လိုးခံရတာကိုကြည့်ချင်မြင်ချင် တာ..ငါ့ဆော်ဖြိုးကအထန်မယား လို့ခေါ်တယ် မင်းကတော့သူနဲ့ငါ့အတွက် ဘူး (အထန်ကောင်) ဆိုတဲ့ကြားလူပေါ့ နောက်ထက်မင်း မသိသေးတာက ဖြိုးမင်းနဲ့ငါသူငယ်ချင်းဆိုတာသိတယ် အဲ့တာအပြင် မင်းမိန်းမနဲ့လည်းသူကသူငယ်ချင်းလေ ..ဘာ…ဖြိုးသိနေ တယ်ငါ့အကြောင်းတွေကို..အေး..ကိုနိုင် မင်းဘယ်လိုလဲဖြိုးကိုလိုးရတာသဘောကျလား…သူဖင်တွေကိုချရတာသဘောကျ လား….ကျွန်တော်ယောင်ပြီးပြောလိုက်တာက အင်းတစ်လုံးတည်းပေါ…. နိုင်လင်းဆက်ပြောတာက မင်းမိန်းမသီရိ ကိုမင်း ဘယ်လောက်ချစ်လဲ သူတခြားသူနဲ့ဖောက်ပြန်တာ မင်းလက်ခံနိုင်လား..မေးရက်တယ်နိုင်လင်းရယ်ငါဘယ်လက်ခံနိုင်မလဲ ..အဲ့တာ ဆိုသူအလိုကိုမင်းမဖြည့်နိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကျွန်တော်အရမ်းတွေဝေသွားခဲတယ် သူပေးတဲ့အတွေးထဲမှာ……
ငါဘာလုပ်ရမလဲနိုင်လင်း..ငါ့ကိုပြောပြပါပြောပြပါသူငယ်ချင်းရာ…..မင်းမိန်းမသီရီကိုစမ်းသပ်ပေါ့ကွာ သူဘယ်လောက်ထန်လဲ ဘယ်လောက် စိတ်ကြီးလဲသိအောင်လုပ်ပေါ့ မင်းလုပ်မယ်မလားကိုနိုင်… အင်းလုပ်မယ်သူ့ကိုစမ်းကြည့်မယ်သူငယ်ချင်း… အဲ့တာ ဆိုမင်းအဝတ်အစားကစပြီးစမ်း အတိုတွေနဲ့လည်ဟိုက်ဆင်ပေးပြီးသူများတွေကြည့်နေတာသူသတိထားမိအောင်လုပ်ကြည့်..အေး လုပ်မယ်နိုင်လင်း အဲ့နောက်သီရိကိုကျွန်တော်အစီအစဉ်တိုင်းလုပ်ကြည့်တယ်သူ့ကိုဘယ်သူတွေကြည့်ပြီးပြစ်မှားနေတယ်ပြော ပြောပေးတယ်အစကသူမဟုတ်ပါဘူးသည်လိုပဲကြည့်တာနေမှာပါပြောတယ်နောက်ပိုင်းသူကိုတိုင်သတိထားပြီးဘယ်သူကြည့်နေ တယ်ဆိုတာလက်တို့တတ်လာတယ်…နောက်ဆိုကျွန်တော်မပါတောင်နို့တွေပေါ်နေအောင်ဝတ်ပြီးသွားရတာသဘောကျလာတယ်
နိုင်လင်းမင်းပြောသလိုငါ့မိန်းမလိုက်လုပ်ပြီးသူ့ကို့ပြစ်မှားပြီးကြည့်တဲ့အတွေခံချင်နေပြီဘာဆက်လုပ်ကမလဲနိုင်လင်း မင်းတော် တယ်ကိုနိုင်မင်းလုပ်နိုင်တယ်လေးစားတယ် မင်းမိန်းမသီရိကိုအရောင်တင်ပေးနိုင်လိုက်ပြီ…သူ့ကိုနောက်ထပ်မင်းလိုးတိုင်း သူ့ကို ကြည့်ပြီးလိုးချင်တဲ့သူတွေ အနေနဲ့ပြောပေးကြည့် ခံစားခိုင်းကြည့် ဟိတ်ကောင်ဖြစ်ပါ့မလားကွ လုပ်ကြည့်ပါဘာပြောလဲသာ ပြန်ပြော..အေးပါကွာမင်းကိုပဲဆရာတင်ရမှာပဲ …မိန်းမသီရိနေ့လည့်က ဘယ်သူလိုက်ကြည့်သေးလဲငါ့မိန်းမချောလေးကို…… ရုံး ကကောင်လေးလေသူကို့အကိုသိပါတယ်သူနာမည်က ဇော်ဇော်လေ… အော်အေးသိတယ်..သူလား အကိုကြည့်တာမှ အဝတ်မရှိ ဘဲ နေနေသလိုကြည့်တာ ကျက်သီးတောင်ထတယ် ကိုမြင်ရင်သဝန်တိုနေမှာသိလား ကို့လီးကကြည့်ပါအုံးအရမ်းတောင်နေ ပြီ..ဟောတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပါလား စကားပြောနေရင်း မိန်းမသီရိ လိုးရအောင်အရမ်းလိုးချင်လာပြီ
လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ အခုသီရိကိုဇော်ဇော် လိုးနေသိလားမိန်းမ ကိုကလဲ သီရိကိုဇော်နဲ့ပေးလိုးနေတာလား ဇော်ဟုတ်လား အဖျားတောင်စွတ်ပြီးခံစားနေတာလား မိုက်တယ်ကွာ သီရီဇော်လိုးပေးတာကောင်းလား အရမ်းကောင်းတယ် အရမ်းကောင်းတယ် မသီရီယောက်ျား အရှေ့မှာ လိုးပေးမယ် မသီရီကို ဖင်ပါလိုးပေးမယ် ….ကိုဘာတွေပြောနေတာလဲ သီရိအရမ်းရှက်လာပြီ … အား..ကိုသီရိပြီးတော့မယ် ကိုမြန်မြန်လိုး..လိုးပေး…..အား…. နိုင်လင်းမင်း အရမ်းတော်တယ် ငါ့မိန်းမသီရိ သူတခြားသုလိုးတာ ခံ ချင်နေပြီ ငါလဲအရမ်း ဖီးဖြစ်တယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီး …..ok. ကိုနိုင်မင်းငါ့ဆော်ကိုလိုးတုံးငါ့ဖီးကိုသိပြီနော် အေးပါနိုင်လင်းရာ မင်း သီရိကို လိုးမလား.ငါကျိုးစားကြည့်မယ် လိုးမှာပေါ့ကိုနိုင်ရ သီရိဖင်လုံးကတော်တော်မိုက်တာ …ok
သီရိ မိန်းမ မင်းနိုင်လင်းကိုသိတယ်မလား အင်းသိတယ်လေ အကိုနဲ့သူငယ်ချင်းပဲဟာ သူမိန်းမကို လိုးချင်နေတာအကို သတိထားမိ တယ် ကိုနော်ကို့မိန်းမကိုအဲ့လိုပြောစရာလား…သီရိကလဲဟိုနေ့ကတောင်ဇော်ဇော် နဲ့ လိုးသလိုကိုလုပ်ပေးတာကြည့်လေ အရမ်း ကောင်းတယ်မလား..ကိုနော် မသိဘူးသွားသူများအရမ်းစိတ်ပါသွားအောင်လိုးပြီး အခုလဲကို့သူငယ်ချင်လေ သူကမချောဘူးလား ချောပါတယ် အဲလို့ချောချောလေးကို စိတ်မပါဘူးလား ကိုမိန်းမကို နားလည်ပေးနိုင်တယ်လေ ပိုလဲချစ်တယ် သူကိုတွေ့ကြည့်မ လား…ကိုတကယ်ကြီးပေးနေမလို့လားသီရိကို သီရိကိုသူနဲ့နေစေချင်တာလားကိုကရော ကိုသီရိကိုပိုပြီး ခံစားစေချင်တယ် ပိုပျော စေချင်တယ် သဘောတူလားကိုပြောတာ ….. အင်းကို့သဘောလေ သူသီရိကိုအရမ်းလိုးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကိုပြောထားမယ် လေ စိတ်ချနော် ဘယ်တော့လဲကို ..ဒီနေ့ညပဲလုပ်လိုက်မယ် ….ဟယ်
ဒီည အင်းသီရိ …… သီရိ နိုင်လင်းလာပြီ တခုခု ဧည့်ခံလိုက်အုံးကို အပြင်ထွက်ပြီးလိုတာဝယ်လိုက်အုံးမယ် …ဟုတ်ကိုနိုင် မြန်မြန် ပြန်လာနော် အေးပါမိန်းမကလဲနိုင်လင်းကမကိုက်စားပါဘူး… မကိုက်စားတာတော့သိတာပေါ့အခုလာတဲ့အကြောင်းကကိုက်စားမှာ ထက်ပိုကြောက်ဖိုးကောင်းတယ် သီရိကလဲ ပိုရင်ခုန်ဖို့ကောင်းတာပါ….ပြောတတ်တဲ့ကိုလူချောကို့မိန်းမကို တခြားသူကလိုးဖို့လာ တာ ရင်ခုန်နေတယ်ပေါ့… သွားသွားမြန်မြန်သွားပြီးပြန်လာခဲ့ …ဟိုလူကရောက်ထဲစားတော့မဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတာအသည်းယား စရာကြီး….အမလေးကြက်သီးတောင်ထတယ်…
သီရိညီမကိုနိုင်ဘယ်ထွက်သွားပြန်တာလဲ… လိုအပ်တာလေးသွားဝယ်တာကိုနိုင်လင်း ဟာ..သည်ကောင်ကလဲ အားနားစရာ ကြီး…..အမလေးလေးသူကအားနာတယ်တဲ့ငါ့ကိုငါ့ယောက်ျားရှေ့မှာလိုးဖိုလာတဲ့သူကများ ပြောတတ်လိုက်တာ ..အင်းပုံစံကတော့ မိုက်သားဘော်ဒီလဲတောင့်မဲ့ပုံ လီးလဲကြီးမဲ့ထင်တယ်ကိုနိုင်ထက် ငါ့ကိုငါ့လင်မဟုတ်ပဲ အလိုးပထမဆုံးခံရမဲ့သူက ငါ့ရှေ့တောင် ရောက်နေပါပြီလား…ရင်ခုန်လိုက်တာ သီရိ ညီမအရမ်းလှတယ်သိလား ကိုယ်လုံးကိုပေါ်စေတယ် သီရိဝတ်လိုက်တိုင်း ကိုဆိုအမြဲ ပြောနေကိကိုနိုင်ကို ကိုလင်းတော့မြှောက်နေပါပြီ ဖြိုးလောက်မလှပါဘူး လှတာပေါ့သီရိကလဲဖြိုးနဲ့အကွာကြီး ..သိရီကိုရလို့ကိုနိုင် အရမ်းကံကောင်းတယ်လို့ရုံးမှာပြောကြတယ်လူတိူင်း ဟုတ်လား တကယ်ကြီးလားသီရိတော့ခေါင်တိုက်တော့မယ်ထင်တယ် မြောက်ပြီးလေ တကယ်ပြောတာသီရိကိုယောက်ျားတိုင်းအခုရရင်အခုယူမဲ့သူကြီးပဲ ပြီးတော့ အနားကပ်လာသီရိတိုးတိုးလေးပြော မယ် သိရီကို ကို့တို့တစ်ရုံးလုံးမလိုးချင်တဲ့သူမရှိဘူး အဲ့တာသီရီယျေ်ားအသိဆုံးပ.ဲ .ရှင်..
ဘာတွေလာပြောနေလဲမသိဘူး….တစ်ရုံးလုံးကယောက်ျားလေးတွေလား.. ဟုတ်တယ်သီရိ …. အခုတောင်သီရိကိုကိုအရမ်းလိုး ချင်နေပြီ ဟိုကောင်ကသူ့ရှေ့ မှာစလိုးပေးဖို့ပြောထားလိုလေ… ကိုနိုင်ကသီရိကို ဘာလို့ကိုနိုင်လင်းနဲ့ လိုးခိုင်းချင်တာလဲအကို….သူ သီရိကိုချစ်လို့ပေါ့ …ဟင်..ကိုနိုင်လင်းရောဖြိုးကို အဲ့လိုအလိုးခံခိုင်းမှာလား …ဖြိုးကိုတစိမ်းလူတွေနဲ့လိုးခိုင်းမှာလား… သီရိပြောတာ တောင်နောက်ကျနေပြီဖြိုးအခုဆိုကိုတို့ရုံးကလူတွေနဲ့ အလိုးမခံဘူးတဲ့သူမရှိဘူး….တကယ်ကိုနိုင်လဲပါတယ်လာ…အဟုတ်ပေါ့… ကျန်ကျန်သူကအပြင်မှာဖြိုးကိုတောင်လိုးပြီးနေပြီ…ဟောပြောရင်းသူပြန်လာပြီတကယ်ကြီးငါသူများအလိုးခံရတော့မှာပါလား…
သောက်စားကြပြီးညနေစောင်းကနေမှောင်စပြိုးလာတော့ အိမ်တခါးတွေကိုနိုင်လိုက်ပိတ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့မိန်းမအလိုးခံဖို့ ပြင်ဆင်လို့စိတ်ထဲဖီးအရမ်းဖြစ်နေသည်ပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်မိန့်းမကိုနိုင်လင်းစပြီးနမ်းလိုက်ပြီး သိရီမျက်လုံးလေးမှေးပြီးစင်းလာပြီ လက်တွေက သီရိအဝတ်တွေစပြီး ခွာချနေလိုက်တာ အောကားကြည့်ရတာထက် ပိုပြီးဖီးဖြစ်မိတယ် သီရိမျက်လုံးတွေကျွန်တော့ စီ ရုတ်တရက်ရောက်လာပါလား သူမျက်လုံးအကြည့်မျိုး ကတနှာစိတ်တွေပြည့်နေပြီလို့ခံစားရတယ် သူကျွန်တော့ကိုကြည့်ပြီး သူ ဖီးတတ်နေတာ သူ့ကိုစလို့တဲ့ညကလိုပါပဲလား နိုင်လင်း နို့စို့ရင်းကအောက်ကိုတဖြေးဖြေးဆင်းလာပြီးသီရိ ရဲ ရတနာလေးကိုယက် ပေးလိုက်သည် သီရိ သီရိအခုတော့ငါနင့်ကိုလိုးရတော့မှာပါလား… နင်ငါလိုးတာခံရတော့မှာပါလား အရင်ကတော့မင်းလောက် တည်ငြိမ်တဲ့သူမရှိသလိုနဲ့အခုတော့နင့်လင်ရှေ့မှာတင်နင်အလိုးခံနေပြီနင်ကိုသေလိုးပြစ်မယ် နင့်ကိုလိုးဖို့ငါကြိုတင်ပြီးဂေါ်လီတွေ အချိန်ပေးထည့်ထားတာသုံးနှစ်ရှိပြီနင်ကိုနိုင်နဲ့ယူတဲ့နေထဲကလေ… …..အားအား သီရိကိုလိုးပေးပါတော့နော်ကိုနိုင်ရှေ့မှာလိုပေးပါ တော့ကိုနိုင်လင်းသီရိမနေနိုင်တော့ဘူးနာ် ..အင်းပါသီရိရယ်အခုလိုးပေးမယ်…. ကိုလီးကိုကြည့်ပါအုံး…အမလေးအကြီးကြီးပါလား အဖုအထစ်တွေနဲ့ သေတော့မှာပဲ…. မသေပါဘူးသီရိရယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားမှာပါ
နိုင်လင်းသီရိကိုလိုးနေပြီ လိုးနေပြီ ဆောင့်ချက်တွေကလဲပြင်းလိုက်တာသီရိကော့နေတာပဲ….. သီရိအရမ်းကောင်းနေပြီ …မိုက် တယ်ကွာ…သီရိကိုတစိမ်းလူလိုးနေပြီငါ့ရှေ့မှာတင် အခုကြတော့လဲခံနေလိုက်တာ ကော့ပျံနေတာပဲ အရင်ကသီရိမှဟုတ်ရဲ့လား တောင်ထင်ရတယ် ဟောကုန်းပြီးစုပ်နေပြီဟိုကောင့်လီးကို အငမ်းမရပါလား တော်တော် ထန်နေပြီ ငါ့လီးလဲအရမ်းတောင်ပြီးထုလို့် ကောင်းနေပါလား သီရိအဲ့ကောင်နဲ့အလိုးခံတာကြည့်ပြီး… ဖင်ထောင်လိုးနေပြန်ပြီသီရိဖင်တွေတုန်ဆင်းနေတာပဲ ရမ်းနေတာပဲ သူကလဲပြန်ဆောင့်တယ်ဟ တော်တော်နှာကြီးပါလားသီရိတယ်အခုတော့နင့်စိတ်တွေ ပြလိုက်ပြီပေါ့ ….သီရိရေနင့်လင်ကြည့်ပါအုံး နင်အလိုးခံနေတာကြည့်ပြီးဖီးအရမ်းတတ်နေပြီ ပါးစပ်ကလတတွတ်တွတ်နဲ့ဘာတွေပြောနေလဲ မသိဘူး..နင့်ဖင်ကြီးတွေလိုးလို့ အရမ်းကောင်းတယ်ဟာ …နင့်ကိုကိုနိုင်ဖင်လိုးလား .. မလိုးဘူးဘူးကိုနိုင်လင်း..
ကောင်းတယ်နင့်ဖင်ကိုငါပါကင့်ဖွင့်ပေးမယ်… ဖင် …ဖင်လိုးမလို့လား…နာမှာပေါ့မလုပ်ပါနဲ့နော် မရဘူးနင့်လင်ကိုပြောပြီးသား ငါ လိုးရင်ဖင်ပါလိုးတတိတာ ကိုနိုင်လင်းသီရိပြီးတော့မယ်…မြန်မြန်..အမလေးကောင်းလိုက်တာ ဘယ်လိုကောင်းမှန်းမသိဘူး.ပြီးပြီ ပြီးပြီ….ဟင်း…..သီရိပြီးပြီဆိုကို့အလှည့်နော် …တေ.ွမယ်ဖင်ကောင်းတဲ့သီရိဖင်ကိုလိုးပြစ်မယ် ကိုနိုင်လင်းဘာလို့ထုတ်လိုက်တာ လဲ မလိုးတော့ဘူးလား …မဟုတ်ဘူးသီရိဖင်ပြောင်းလိုးမလို့ …ဟင်.. ကိုနိုင် သီရိကိုဖင်လိုးမလို့တဲ့ကိုနိုင်တောင်မလိုးဘူးသီရိနာမှာ ဆိူးလို့ ကိုနိုင်မပြောတော့ဘူးလား….. ကိုနိုင်လင်းကိုကိုကတိပေးတားတယ်မိန်းမ သူနဲ့လိုးခိုင်းရင်သူ့သဘောပါလို့…..တကယ်ကြီ လာ… တွေ့တယ်နော်သီရိလေး နင့်လင်သဘောတူပြီးသားသူမလိုးရသေးနဲ့ ဟောက ဖင်ပေါက်လေးကို ကိုအရင်လိုးပြီးပါကင်ဖွင့် ပေးမယ် သီရိဖင်ကိုတွေ့တိုင်းဖင်းလိုးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာသိရဲ့လား အခုဖင်ကိုဂျယ်လိမ်းပေးမယ် သီရိမနာအောင် …များများ လိမ်းပေးကိုနိုင်လင်း ရပြီးအသက်ကိုပုံမှန်ရှုပြီးစအိုဖွင့်ထားသီရိ ထည့်တော့မယ် … နိုင်လင်းခနလေးခနလေး ဘာလဲကွ ငါတေ့ ပေးချင်လို့ပါကွ ….ဝိုးမိုက်ချက်ပဲဟေ့တွေ့လားနင့်လင်ကိုတိုင်နင့်ဖင်လိုးဖို့ တည့်ပေးချင်နေတာ ရပြီထည်လိုက်တော့ ….အား….နာ တယ် ခေါင်းဝင်နေပြီမိန်းမ ရတော့မယ်တောင့်.ထား
အား…ကောင်းတယ်ကွာမင်းမိန်းမဖင်ကကြတ်နေတာပဲ ok ရသွားပြီ အားလုံးဝင်သွားပြီမိန်းမ အော်ကိုနိုင်သူကိုတိုင် ကျွန်မဖင်ခံဖို့ တေ့ပေးပြီး ခံခိုင်းနေတာပါလား အဝင်အထွက်လုပ်နေပြီ တမျိုးပဲနာလဲနာတယ် ကောင်းလဲကောင်း သလိုပဲ..သီရိရေငါနင့်ဖင်ကို လိုးရပြီဟ. နင့်ဖင်ကိုမှန်းရကျိုးနပ်ပြီ ကောင်းတယ် … အမလေး ကောင်းလိုက်တာ ဖင်ခံတယ်ဆိုတာ ကိုနိုင်လင်းလိုး ကြမ်းကြမ်း လိုး ငါ့မိန်းမသီရိဖင်ကိုကြမ်းကြမ်းသာလိုး သူခံနိုင်နေပြီ လိုးမှာလိုးပေးမှာ ကိုနိုင်းမင်းရှေ့ကသွားလီစုပ်ခိုင်း ပြီကြည်.့…. သီရိလို တည်ကြည်ပြီ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ရုပ်ကလေးကအခုတော့ တနှာခိုးတွေပြည့်ပြီးဖင်အလိုးခံနေလိုက်တာ ဘေးအိမ်က အထန်းသမား အငယ်လေးချောင်းကြည်ဘပြီးအံဩနေပါတော့တယ်…အလိုးခံလိုက်ရတာများမနက်မိုးလင်းတဲ့ထိနိုင်လင်းနဲ့သူ့လင်ကိုနိုင်သီရိကို တနှာကြီးသောမိန်းမအဖြစ်လမ်းဖောက်ပေးလိုက်ပါတော့သည်
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ခံစားခကျြရဲ့အစှနျးနှဈဖကျ